Hel Hacks masaf - Waa maxay Waa in aad ka ogaato Ka hor - Masaf Of The Day
Samaynta go'aanka ah in heli hacks masaf aad ee hogaanka u ah wax wanaagsan samaynaya la noloshaada gelin doonaa, sida aad awoodaan in ay diiradda saaraan wax in ay gebi ahaanba laga fekerayo ah oo aad uga go'an tahay in ay guul u noqon doonaa.
hacks masaf The Barnaamijka waxaa badeecadaha kulul maalmahan iyo qiimaha waxbarashada sirta ganacsiga ee qof ee ugu guulaha badan Russell Brunson Timid qiimaha a.
Waxaa jira yaraynta aad u yar si ay u maal-this. Russell waa mid aad si toos ah aad la soo bilaabo xilliga aad galaan wax uu qurbaankiisa, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ogaato wadada dheer uu lahaa in ay qaataan oo ay halkaas ka heli.
Haddii aad u tagto oo ku saabsan istiraatiijiyad ganacsi sida saxda ah, waxa kale oo aad heli doontaa fursad ay ku guulaystaan. Laakiin ma filan in ay dhacdo habeen.
Filed Under: Funnel Hacks Tagged With: heli hacks masaf